Heeganka gabdhaha iyo dumarka | dinarattigheter
Heeganka gabdhaha waxaa la xiriiri kara qofka isku arka inuu yahay gabar ama naag oo u baahan wax uu la hadlo. Heegan walba oo gabdheed wuxuu leeyaahay adarees mayl badankooduna waxay leeyihiin sheekaysi qoraal ah iyo taleefan aad wici kartid.
Heeganada gabdhaha agtooda mar kasta waxaad ahaan karta mid aan aqoonsigiisa sheegin, dadka aad la hadlaysaana waxay ballan qaadeen in ay xogta xafidaan. Taas oo macnaheedu yahay in aan qof kale waxba loo sii sheegi Karin. Heeganka gabdhuhu hay’ad ma ahan taas oo macnaheedu yahay in uuna saarnayn waajibka gudbinta dacwo. Sidaas darted waxay noqon kartaa naruuro in marka hore lala hadlo heegan gabdhood si loo falanqeeyo dareernka iyo fikradaha la qobo marka hore si deggen, ayadoo aan loo baahnayn in laga welwelo in cid ku qasban tahay in ay dacwo gudbiso. Heeganada gabdhuhu waxay ku yaalaan magaalooyin badan laakiin magaalo walba kuma yaalaan. Uma baahnid in aad la hadasho heegan gabdhooh oo ku yaal magaaladaada. Waxaad ka heli kartaa heeganka gabdhaha www.tjejjouren.se
Heeganka dumarka ayagana waa lala hadli karaa, sida heeganka gabdhaha oo kale, laakiin waxay kaloo leeyihiin meelo qarsoodi ah oo la dego oo loogu noolaan karo si sir ah haddii loo baahdo in si kedis ah looga tago qoyska laga dhashay ama lammaanaha. Heeganka gabdhaha iyo kan dumarkuba waxay xiriir fiican la lahaan karaan booliska iyo xafiiska adeegga bulshada oo waa ogaan karaan cidda ay haboon tahay in lala hadlo haddii uu qofku rabo.